Ihe oyiyi ndị ahụ nke Sony Xperia X2 pụtara | Gam akporosis
Ihe ndị a bụ ihe oyiyi nke Sony Xperia 2 na-ekpughe ma gosipụta ọdịdị ya
Sony achọghị ịtọgbọ mmeri mgbe ọ na-amụba ọnwụ nke ego n’otu n’ime ahịa ndị o nwere traktị kasị ogologo kemgbe amụrụ ya, nke bụ nke smartphones. Companylọ ọrụ Japan anọwo na na-ebughari ufodu iji gbanwee nsogbu ya ugbu a ma ọ bụghị nke na-akwụghachi ụgwọ, na mmalite nke ngwaọrụ kpakpando ya, nke bụ Xperia 10 na Xperia 1, ọkọlọtọ ya ugbu a, wepụtara ha iji dọta uche ndị ahịa ọzọ ma wepụta ọnụ ọgụgụ dị mma.
Onye nrụpụta ahụ, inye ike maka omume ndị ọ mere na nso nso a iji weghachi n'ihe ọ dịbu na ụwa nke smartphones, na-akwadebekwa ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ nke ga-abata Xperia 2. Ihe na-egosi na ekwentị a dị nso siri ike, nke a bụ ihe na-akwado nkwado a na-adịbeghị anya anyị na-ekwu maka ya, nke ezigbo foto ya. Ugbu a iji nweta ike, anyị na-ekpughere nsụgharị nke nke a n'oge na-adịbeghị anya.
Egosiputala aesthetics nke Sony Xperia 2
Sony Xperia 1 bụ ekwentị nke ghọrọ ọkwa na ahịa na February. Ọ nakweere gbara gharịị 21: 9 usoro nhazi usoro na usoro ndị ọzọ dị elu na nkọwapụta. Onye nọchiri ya, nke bụ Xperia 2, ga na-ebughibu obubọk, ọ bụ ezie na ọdịdị ya nwere ike ịgbanwe, ya mere diagonal ga-adị iche. Nke a ga - abụ nkwado maka imewe ụdị nke anyị chọtararịị na ngwaọrụ ahụ e kwuru na mbụ, dị ka a pụrụ ịhụ na onyonyo ya.
N’agbanyeghi nke ahu, enwere ike iburu n’obi na ga-eweta mgbanwe ụfọdụ, dị ka igwefoto okpukpu atọ kwụ ọtọ ma dị na akuku aka ekpe nke mkpuchi azụ, kama ịnọ na etiti elu. Mkpọchi anụ ahụ ga-abụ otu ma a ga-edozikwa ya n'otu ụzọ n'akụkụ aka nri yana onye na-agụ mkpịsị aka. Banyere modul foto n'azụ, a na-ekwu na ọ nwere otu ihe mmetụta ahụ nke Xperia 1 na-ebu; Ọ bụrụ otu a, anyị ga - eche ihu na - eweta ihe ndị a: 12 MP + 12 MP + 12 MP.
Ihe nhazi nke gha enye ya ndu agagh adi ihe nlere Snapdragon 855 site na Qualcomm, nke bụ ihe anyị na-ahụ na ụdị ugbu a. O yikarịrị ka ị ga-eji obere ihuenyo merie ahịa ahụ, yabụ a ga-egbutu batrị. Ọ bụ ezie na ụdịdị ahụ ga-adị ntakịrị na ngalaba ụfọdụ (dị ka ndị a), a ga-ewepụ ha n'akụkụ ndị ọzọ.
Iji nwetakwuo echiche nke ihe anyị ga-ahụ na ọkwa ọzọ nke ụlọ ọrụ Japan, Have ga-eburu n'uche àgwà niile nke Xperia 1 na-etu ọnụ; site na ndị a, anyị nwere ike ịtụ anya ọtụtụ mmezi. Ekwentị a na-enweta ihu igwe OLED 6.5 nke anụ ọhịa nwere nnukwu QuadHD + mkpebi nke 3,840 x 1,644 pikselụ, nke na-eme ka ọ rute njupụta pixel mara mma nke 643 dpi yana akụkọ 21: 9 kọrọ. Ọ na-adịghị eji ụdị ọ bụla nke notch ma ọ bụ retractable selfie igwefoto usoro. Ya mere, o nwere bezels akpọtụrụ aha, ọ bụ ezie na ọ bụghị n'akụkụ ya. Na mgbakwunye na nke a niile, Corning Gorilla Glass 6 na-enye ndụ na ngalaba ahụ iji kpuchido ya na ncha, isi na ụdị mmegbu ndị ọzọ.
New Sony Xperia 20 ụdịdị dị iche iche na-egosi na-egosi Snapdragon 710 dị ka SoC
Na mgbakwunye na SD855 nke o nwere na eriri afọ ya, ama ama abịa nwere 6 GB Ram na 64 ma ọ bụ 128 GB nke ebe nchekwa dị n'ime. Anyị ekwesịghịkwa ichefu igwefoto ya na-azụ atọ, nke, dị ka anyị kwurula, nwere ihe ntanetịka mkpebi 12-megapixel atọ. Maka selfies, sistemụ ihu ihu, oku vidiyo na ndị ọzọ, anyị nwere igwefoto MPN 8 na elu bezel ya.
N'ezie, sistemụ arụmọrụ nke Android 9 Pie na-agba ọsọ na ngwaọrụ ahụ, yana sistemụ okwu stereo, batrị ikike 3,330 mAh nwere nkwado maka ngwa ngwa ngwa ngwa 18-watt na ihe mmetụta dị iche iche na nhọrọ njikọta dị elu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ihe ndị a bụ ihe oyiyi nke Sony Xperia 2 na-ekpughe ma gosipụta ọdịdị ya
Ihe ngosi nke Galaxy Watch 2 ga - abia na mbu na ufodu ahia